Odayaal dhaqameed eedeeyay Shirkadda Dahabshiil
7/12/2012 4:26:00 P
| Comments() Muqdisho--KNN--Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka somalida oo kulan ku yeeshay muqdisho ayaa waxa ay eedeyn kulul dusha kaga tureen shirkada Dahabshiil
Nabadoon Cali Xasan Ibraahim oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ka soo jeeda koofurta Soomaaliya ayaa sheegay in Dahabshiil aysan ka qeyb qaadan caawintii loo sameeyay dadka reer koonfurka ah ee abaaraha ay sida daran u saameeyeen.
Aadan Maxamed Mayow oo isna kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in shirkadaan dhaqaalihii ay ka faa'iday koofurta Soomaaliya ay ku maal galisay gobolada waqooyi. C/laahi Siid Cali Xuseen ayaa ugu baaqay Dahabshiil in ay ceebta iska dhaqdo isla markaana ay ka qeyb qaadato caawinta dadka tabaaleysan ee Soomaliyeed.
Dhawaan ayey aheyd markii ay dad ku sugun Liibiya ay sheegeen in ay xayirtay lacaga ay lahaayeen.
Dhiigshiil dulmi hor.lahoo soo baxay ayaa tahay dareen hore ayaa qabnoo dadku u bidhimi ban lahaa dahir fursad isiyo digniin dhiigshiil kumi ha dhigan alahayahoow dhiigshiil na dhafi Posted by Mahamud geedi farah on 7/13/2012 4:15:06 AM S/C waxani maahan wax ay wax ka jiraan arinta waxa buunbuuniya oo si gaar ah ula col ah dhiigshiil ninka la dhaho daahir calasow ee afka guduudan ninkan dhiigshiil wuu shaqeestay lacagtee iska dhaf xasidka Posted by mohamed2_5@hotmail.com on 7/13/2012 11:04:18 AM Waa run warka odiyaasha. Anoo aqool aan uleeyahay odiyaasha aan utaageersaneen oo aan maqlay. Magacooda hada lkn waxaan kutaageersanahay odiyaaasha in DAhHAB SHIIL aan wax taageero ah aan ka qaadan koofurta soomaliya oo aan maqalnaa in maalgelin iyo taageekuleen ka geeysato Jaamacadaa , warshadaha, sirkadaha, wadooyinka, iyo caafimaadka iwm. Maantase in uu kaadlaa ina Dhiighiil arimaha koofurta somalia maaha Taa waan canbaareeynay anoo ah jaaliyada Somalia ee Sout Africa Posted by A/laahi yare on 7/13/2012 2:16:19 AM A/cSalaanta islaamka kadib, waxaan rabaa inaan kubayaaniyo dadka danaha gaarka ah kaleh ee aan ceebta kaxishoon iyo idayaasha maxishoodayaasha ah ee ku fashilmay kaalintii ay kulahaayeen bulshada dhexdooda maahan in cadaalad xumadii ay horey noo badeen, ee ahayd qofkii qof dila habixiyo diyadiis Qofkow dilay ee ahayd 500.000 sh/somali oo tuugii wax dilay isbaaro intuu dhigtay kubixiyay lacagtii. Soo kuwii maahan odayaashani waxa nala haray hadaanay shacbiweynaha koonfureed waa kuwan oo kale ee aan fikir dheer lahayn ee ah kuwo sandareerto raadis ah. Ilaahayna hanoqdeen, dahabshiil waxaan ogahay inax kumanaan jeer raashin iyo daawo iyo dhar ku deeqday hadana waxaan katuhgaynaa wixii karaankiina ah lu deeqa maantay adinkaa ilaahay wac idii. Dhiibee, daahirna wacaan leeyahay wuxuu yahay qof somali ah wuu yaqaanaa waa minkii naagta guursaday meherkii ay kulahayd diiday kadibna ayadu ay iska bixisay si ay madaxeeca uga hesho. Barakaatna ragii wax kaxirey ayuu aha maxaakiimtiina munaafaqii kusameeyay dadka reer muqdisho waa og yihiin. Dahabshiilna wuxuu kuceersaayana walayaqaan hunguri isiixa hadii kale warbixin aan ifinka qoraa been ah iyi bulshada oo aan marin habaabiyo. Daahir waligaaba waxaad ahayd gaal raac iyo mushrik u adeeg iyo inta wanaagsan oo ay islaamku jecel yihiin kii ay dhibto. Waatii ilaahay kuyidhi ayaadkiisa mushrikiintu marna raali kama ahan inxaalad wanaagsan idin taabato. Haday idin taabatana iyaga wey dhibaysaa marka daahir wuxuuba dhinac kashabahaa kuwa dhibsada islaamka. Bal fiiri mar uusan xumaan kasheegayn dadka muslimka ah ee somaliyed malahan. Wax dad lugoynaya mooyee wax kale maqoro. Talo war ninyahow ilaahay kacabso hadii in yar oo alle kavabsi ah kujiro qalbigaaga ogowna xisaab inay danbayso wasalaamu calaykum waraxmatullah bye Posted by Alasey on 7/13/2012 4:47:50 PM Name: (Required)